Fampiharana 10 ho an'ny iPad Air sy iPad Mini Retina asongadin'i Apple (sy III) | Vaovao IPhone
Vaovao IPad | | App store, iPad Air
Manohy ny ampahatelon'ny Ny fampiharana 10 natao hananana be indrindra Araraoty ny fanodinana vaovao sy ny fampisehoana retina izay ananan'ny iPad Mini sy iPad Mini Retina vaovao. Ireo fampiharana ireo dia nofidian'i Apple manokana.
Araka ny efa nampahafantarinay anao tamin'ny iPad News, nanomboka omaly iPad Air dia misy amin'ny magazay Apple, izay hitsapana ny voalohany ary ny tapany faharoa amin'ireo rindrambaiko natao manokana ho an'ity fitaovana ity sy ny iPad Mini.
Siansa malaza +
Siansa malaza + dia magazine nomerika ny teknolojia, siansa, gadget, habakabaka ary maro hafa. Avy amin'ny Air sy iPad Mini Retina dia afaka mankafy endri-javatra manokana toy ny galeri-tsary, horonan-tsary ary atiny fifandraisana hafa.
SketchBook Pro ho an'ny iPad
Fangatahana ho an'ny manaova sarisary amin'ny iPad Air sy iPad Mini Retina. Ataovy miavaka ny lamba rongony sy ampiasao borosy sy loko isan-karazany hisarihana. Azonao atao ny manoratra ireo fiovana samihafa mba hijerena azy ireo amin'ny horonan-tsary ary avy eo tahirizo ao amin'ny galeriany.
Mpilalao Sky: Raiders Storm
Ity no lalao ady farany napetraka tamin'ny Ady Lehibe Faharoa. Afaka mandray anjara amin'ny adin'ny alika ianao, miaro tanàna, mandrava ny rafitry ny fahavalo…. Anisan'ireo toerana namboarina ny morontsirak'i Dover sy Pearl Harbor.
Mpilalao Sky: Raiders Storm€ 5,49
Birao misy ny sata
Fehezo ny tahirin-kevitra isan'andro. Ampiasao ny dashboard an'ny app hijerena ny kalandrie, bitsika, mailaka, toetr'andro, vaovao ary maro hafa. Azonao atao ihany koa ny manamboatra ny angona mba hanarahana ny asanao na ny fandaminana
Amin'ity fampiharana ity dia hanova ny làlana ianao hahatakatra ny tsenan-tahiry. Amin'ny fijerena ny statistikan'ny tsena dia azonao atao ny mahita fomba fijery momba ny orinasa sy ny sehatra, ary koa ny fandalinana ny fampahalalana ara-tantara momba ny orinasa.
Sky Guide: Mijery alina na andro
Amin'ny alàlan'ny fanondroana ny iPad mankany amin'ny lanitra dia azonao atao tonga dia mahita kintana, kintana, planeta, satelita ankoatry ny maro hafa. Mahafinaritra foana, na firy taona, ny mijery ny lanitra mahita izay miafina ao.
Sky Guide€ 3,49
Namboarin'ireo mpanakanto hampiasain'ny tsirairay. Ity app ity dia mety tsara amin'ny fanoratana hevitra, fanoharana, hosodoko misy loko rano ... na izay rehetra ao an-tsainao.
Bloomberg ho an'ny iPad
Fantaro ny momba ny vaovao farany momba ny orinasa sy ny fitantanam-bola amin'ireo orinasa arahinao mba hahitanao ny fitomboan'ny portfolio stock. Tena mora sy intuitive ny mahatakatra ny fahombiazan'ny tahiry sy ny tabilao.
Diptiq PDQ no fomba haingana indrindra mankany mamorona sary collage ary zarao amin'ny namanao. Miaraka amin'ny efijery retina dia hankafizanao ireo forona noforoninao tamin'ny fomba lehibe.
Ny Pantry manontolo
Fandraisana mora amin'ny fomba fahandro miaraka amin'ny sakafo manontolo mitazona fomba fiaina mahasalama. Manana torolàlana momba ny fahasalamana ihany koa izy io. Ny zava-drehetra dia natao hampahafantarana momba ny tombotsoan'ny sakafo manontolo: manatsara ny torimaso, mampihena ny lanja, mahazo angovo ...
Fanazavana fanampiny -Fampiharana 10 ho an'ny iPad Air sy iPad Mini Retina asongadin'i Apple (I), Apps 10 ho an'ny iPad Air sy iPad Mini Retina asongadin'i Apple (II)
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » App store » Fampiharana 10 ho an'ny iPad Air sy iPad Mini Retina asongadin'i Apple (sy III)
Ny zavatra tsapako momba ny iPhone 5s
Ny fahatongavan'i WhatsApp ho an'ny iOS 7, efa akaiky